C/qaadir Siidi, Gudoomiyaha Sh/hoose oo dhaawac fudud ka soo gaarey dagaal ka dhacey meel u dhow Yaaqbari Weyne – idalenews.com
C/qaadir Siidi, Gudoomiyaha Sh/hoose oo dhaawac fudud ka soo gaarey dagaal ka dhacey meel u dhow Yaaqbari Weyne
Dagaal maanta ka dhacey meel u dhow tuulada yaaqbari weyn oo ka tirsan gobalka shabeelaha hoose ayaa waxaa dhaawac fudud uu ka soo gaarey Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ka dib markii weerar lala beegsadey kolonyo uu la socdey oo maraayey inta u dhexeysa Ballidoogle iyo Wanlaweynoo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Dagaalka halkaas ka dhacey ayaa geystey qasaare nafteed oo soo kala gaarey dhinacyadii dagaalamey, iyadoo ciidamada xarakada alShabab la sheegey in dagaalkii maanta looga dilay ku dhowaad 15 qofood halka 14 kalena looga dhaawacey. Sidoo kale dhanka ciidamada amison iyo kuwa dowlada ayaa iyagana la sheegey in 3 qof looga dilay halka 3 askari oo kalena looga dhaawacey sida ay sheegeen dad goob joog ahaa oo Idale News la xiriirtey u xaqiijiyeen.
C/qaadir Siidii oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in isaga uu soo gaaray dhaawac labo goobood oojirkiisa ka mid ah kuwaasoo kala ah madaxa iyo gacanta bidix kadib markii ay soo weerareen koox ka tirsan ururka Al Shabaab.
“Nimankii Al Shabaab ahaa oo u badan ajnabi ayaa na soo weeraray anagoo ka soo laabanay War-Maxan, Alxamdullilaah waan fiicanahay mar haddii lugta lagu socdo” ayuu yiri gudoomiyaha.
Siidii wuxuu intaa ku daray in illaa saddex askari kale oo labo ka mid ah ay yihiin ciidanka AMISOM ay ku dhaawacmeen weerarka. Inkastoo warar madax bannaan ay sheegayaan illaa saddex askari oo kale ay geeriyoodeen.
Warar Idale News soo gaaray ayaa sheegaya in kolonyada uu la socday gudoomiyaha ay ka koobnaayeen illaa 10 baabuur oo isugu jiray tikniko iyo baabuurta yar yar markii ay wadada u galeen rag ku hubeysan hubka culus oo ka tirsan ururka Al Shabaab maanta duhurnimadii. Weerarkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Yaaq-bari-Weyne.
Hal baabuur oo ka mid ahaa kolonyada ayaa ku gubtay weerarka klaasoo sida wararku sheegayaan uu saarnaa gudoomiyaha Shabeelaha Hoose, waxaana weerarka ka badbaaday Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la socday kolonyada.
Kolonyada la weeraray ayaa sida masuuliyiin isugu jiray maamulka gobolka Shabeelaha Hoose iyo xildhibaano kuwaasoo deegaano hoostaga War-Maxan iyo Yaaq-bari-weyne u tagay heshiisiinta beelo isku khilaafay dhul beereed ku yaalla deegaankasi.
Dhageyso: Maxaa kala qabsadey Booliiska Puntland iyo Dameero lagu soo buufiyey “NO Faroole”
Dhageyso:Ciidamada dowlada oo ka baxey Beled Xaawo iyo Alshabaab oo la wareegey degmada dagaal Culus oo halkaaas ka dhacey ka dib